​सुकिदहका हरिया घर
Friday, 1 Dec, 2017 3:19 PM
रोल्पा, १५ मंसिर । सदरदमुकाम लिबाङदेखि केही कोष टाढा रहेको सुकिदह गाउँ । पहिले पुग्दा हरेक रङले गाउँ रङगी, बिरङगी देखिन्थ्यो । अहिले गाउँ पुरै हरियो रङले सजाइएको छ ।
गाउँमा जनप्रतिनिधि निवार्चित भएपछि स्थानीय तहहरुमा केही न केही नौला कामहरु भइरहेका छन । रोल्पा जिल्लाको सुकिदह गाउँपालिका ३ नं. वडापालिका पुरै गाउँनै हरियाली देखिएको छ ।
सरसफाइको प्रतिक भनेर चिनिने हरियो रंङले गाउँ हरियाली बनेको छ । सुकिदह गाउँपालिका वडा नं. ३ मा करिब ७ सय घरहरु रहेका छन । ती घरमध्ये ८७ प्रतिशत घरमा हरियो रङ लगाइसकेको वडा सचिब कमलराज वलीले जानकारी दिए ।
गाउँको फरक परिचान बनाउनको लागि यो अभियानको सुरुवात गरेको सुकिदह ३ का वडाअध्यक्ष जलेशकुमार केसीले बताए । पूर्ण सरसफाइमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ यो अभियानको सुरुवात गरिएको हो । गाउँका पुरै घर एउटै रङ लगाउँदा निकै सुन्दर देखिएको स्थानीयहरुले बताएका छन । उनीहरु वडापालिकामा एउटै रङ लगाउने कुरामा सहमत भएका थिए ।